Yintoni i-ESRI efuna ilayisenisi ezintsha? - Geofumadas
Yintoni i-ESRI efuna ilayisenisi ezintsha?
Ngokutsho kwesitatimende se-ESRI, ukuqala kunyaka ozayo, kuya kutshintshela ifom yelayisenisi yayo nge-socket (isevisi ye-pulse okanye usebenziso oluphambili oluhambelana nomprosesa).
Nangona ESRI uthi ukuba wenza ukuphucula ubunzima kubangelwa kukuba ukufunda eyenza i "core" xa inkonzo luvuliwe liyachatshazelwa ukufakelwa ezinye izicelo kunye neyantlukwano kwemigangatho zombini software ne-hardware ukuba zigcina ukudala ungquzulwano isiseko okanye imfuno yokuphumeza ilayisenisi nganye ngeprojekthi.
Yintoni i-ESRI ingaqwalasela emva kwesi sigqibo?
1. Nciphisa iipracy
Ngokwenene sicinga ukuba enye yeenjongo ze-ESRI, ixesha elide elidinga inkqubo ebenzima kakhulu ukuyiphula, efana neleyo esetyenziswe ngamanye amapulatifomi apho okubalulekileyo okuveliswe ngokusebenza kubophelela zombini inkqubo yokusebenza kunye nedatha iqela kunye nokuxhomekeka rhoqo kwi-intanethi. Nangona kukho abo batshabalalisa lolu hlobo lwelayisenisi, kunzima kunzima, nangona kubonakala ngathi injongo yokukhusela ilayisenisi iya kwiinkonzo ezininzi kwiinkonzo zeseva, kungekhona kakhulu kumthengi ukwenzela ukuba le njongo ayihambisani.
2 Fumana iilayisenisi zamandulo ngaphandle kweemarike
Le yimfuno engxamisekileyo ye-ESRI kunye nezinye iiplani, kuba iindleko zabo zokuxhasa i-ArcView 3x mazibe ziphakamileyo kuneentengiso ezenziwe yiloo sicelo. I-AutoDesk ikwazi ukunciphisa ngokuthe ngcembe lolu hlobo lobunzima ngokubhaliweyo ukususa inkxaso I-AutoCAD i-R14, kwaye ngoko kwi-AutoCAD 2000; izigqibo ngeempembelelo ezintle kodwa zihambelana negama elithi «Indlela yodwa yokubetha i-piracy yinto entsha, nganye yesibini, ngomzuzu, ngamnye kunyaka, yonke into«... Nangona oku kuthetha ukungahoyi iinguqulelo zangaphambili. Kwaye kuba iilayisensi ezihamba ngenkonzo zivela kwi-8x, kubonakala ngathi le njongo ayisiyeyona nto iphambili kwi-ESRI.
3 Ukuphucula ukungabi nabulungisa kwelayisenisi
Kholwa okanye ungakholelwa, ezinye izinto ziya kulunga ngakumbi (kucingelwa), ezinjengokusetyenziswa kwelayisensi yeArcGIS Server, eqhutywa ngoku yi- $ 35,000 "iprosesa nganye", xa uphatha ilayisensi ngaphandle kwesokisi, ungalindela ukuba ukubeka iprosesa eyongezelelweyo kwiseva akuyi kufuna enye i-35,000 ye- $, kuba iya kuxhasa ukuya kuthi ga kwi-4 cores ngaphakathi kwesokisi enye ... ndinamathandabuzo am.
Ngoko ke i-ESRI ibonakala ifuna ntoni ekugqibeleni ikhuphisane nemveliso yayo (eyiyo kubiza kakhulu) nangona siqaphela ukufaneleka kwabo kunye nenkxaso yeziko.
I-ESRI iqinisekisa ukuba oku akuyi kuphazamisa iindleko, kwezo nkampani okanye kubasebenzisi abaye bafaka inkxaso kwiimvumelwano zabo zelayisenisi ... yilo lizwe elilindele.
Nolu uluhlu lwenkqubo ye-ArcGIS Server kunye ne-ARCIms yokunikezelwa kwelayisenisi
Isixa samanje Inkcazo yelayisenisi Isixa esicetywayo Ukuchaza ilayisenisi
1 I-ArcGIS Server Advanced Advanced Enterprise 2 iziseko ukuya kwii-2 zokuhamba ngefoksi 1 I-ArcGIS Server Advanced Advanced Enterprise ukuya kwi-4 cores
1 I-ArcGIS Server Standard Enterprise 2 iziseko ukuya kwii-2 zokuhamba ngekhosi 1 I-ArcGIS Server Standard Enterprise kuze kufike kwi-4 cores
1 I-ArcGIS Server Basic Enterprise 2 iziseko ukuya kwi-2 cores nganye 1 Inkampani ye-ArcGIS yeSiseko esiSiseko ukuya kwii-4
1 I-ArcGIS Server Advanced Advanced Enterprise socket ukuya kwi-2 cores nganye 2 I-ArcGIS Server Advanced Advanced Enterprise Engundoqo
1 I-ArcGIS Server Standard Enterprise socket eyongezelelweyo ukuya kwii-2 iireysi nganye 2 I-ArcGIS Server Standard Standard Enterprise
1 I-ArcGIS yeSiseko esiSebenzayo soShishino esongezelelweyo Isongezelelo ukuya kuma-2 amalahle nge-socket 2 I-ArcGIS yeShishino seSiseko seNkcazo eyongezelelweyo
1 I-ArcGIS Server Advanced Advanced Enterprise 2 iziseko ukuya kwii-4 zokuhamba ngefoksi 1 I-ArcGIS Server Advanced Advanced Enterprise ukuya kwi-4 cores
4 I-ArcGIS Server Advanced Advanced Enterprise Cores
1 I-ArcGIS Server Advanced Advanced Enterprise socket ukuya kwi-4 cores nganye 4 I-ArcGIS Server Advanced Advanced Enterprise
1 I-ArgGIS yeSebenzi eSebenzayo eSebenzayo ye-ArcGIS 1 iscket ukuya kwi-2 cores nganye 2 I-coreGroup ye-ArcGIS yeSigqeba soPhambili se-1
1 I-ArgGIS yeSebenzi eSebenzayo eSebenzayo ye-ArcGIS 2 iscket ukuya kwi-2 cores nganye 4 I-coreGroup ye-ArcGIS yeSigqeba soPhambili se-1
1 I-ArcIMS 1 iscket ukuya kwi-2 cores nganye 2 Inqobo ye-ArcIMS 1
Nokuba kunjalo, iposi liba yinkalo enkulu, wena okholwayo?
Ngendlela: Ibhokisi le-GIS Blog ye-James Fee
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukuhamba ngeenqwelo zeenqwelo-moya kuDisemba 2007
Post Next Ukususela kwi Kml ukuya kwiGeodatabaseOkulandelayo "